-DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL 13 -...
ဓမ္မပူဇာတေးများနားဆင်ရန် - Dhamma Song Dhamma Radio Channel 13
Tags: DhammaSong Song Dhamma_Song ဓမ္မပူဇာတေးများ -DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL5-...
Tags: professor Dr.Nandamalabhivansa - သာသနာပြုတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ -DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL2-...
ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဝိမလမဟာထေရ် -
Dhamma Radio Channel 2
Tags: ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဝိမလမဟာထေရ် mogokhead mogok_sayardaw_sayartaw Dhamma Radio Channel2-DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL3-...
သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥက္ကဋ္ဌ - Dhamma Radio Channel 3
Please invite and listen radio on gtalk. Tags: သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥက္ကဋ္ဌ - Dhamma Radio Channel3thaeingu sayartaw sayardaw theingu theinguu သဲအင်းဂူ -DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL 1 -...
ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင် (ဆဋ္ဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ နိုင်ငံတော်သြဝါဒါစရိယ ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ကျေးဇူးတော်ရှင်...
Tags: ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင် (ဆဋ္ဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ နိုင်ငံတော်သြဝါဒါစရိယ ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တသောဘဏမှမေး၍ မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အရှင်ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသမှ ဖြေဆိုသည်) - sahtthangaryanartin sahtasangaryanartin Dhamma Radio Channel -DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL6-...
တစ်ဘဝ သာသနာ ကျမ်းပြုအကျော် ဆရာတော် ဦးဃောသိတ
(မိုးကုတ် မဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) -Dhamma Radio Channel 6
Tags: ဆရာတော် ဦးဃောသိတ(မိုးကုတ် မဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) - ugawthita u_ghawthita u_ghawsita ugawsita u_ghosita Dhamma Radio Channel -DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL4-...
International Theravada Buddhist Missionary school professor Dr.Nandamalabhivansa -
Dhamma Radio Channel 4
Tags: International Theravada Buddhist Missionary school professor Dr.Nandamalabhivansa - ဒေါက်တာနန္ဒာမာလာဘိဝံသ(ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်) -DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ]ိDHAMMA RADIO CHANNEL 8 -...
ဒယ်အိုးဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလ -
Dhamma Radio Channel 8
Tags: ဥူးသုမင်္ဂလ - Uthumingala usumingala dalole sayartaw sayardaw dalou dhamma radio channel -DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL9-...
Tags: အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းရွက်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ Dhamma_Radio_channel pahtan patan non stop -DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL 10 -...
Dr.Min Tin Min (English Version) - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် - Dhamma Radio Channel 10
Tags: Dr.Min Tin Min - ဒေါက်တာမင်းတင့်မွန် - Dhamma Radio Channel 10 Pages: 12of 2